Yakatumirwa ne Tranquillus | 14 Sea, 2021 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Izvo zvinokwanisika kuita pasina kunyora muhupenyu hwezuva nezuva, asi iwe haugone kuzvitiza munzvimbo yebasa. Chokwadi, iwe uchafanirwa kunyora mishumo, tsamba, maemail, nezvimwe. Nekuda kweizvi, zvakakosha kuti udzivise kupereterwa zvisirizvo sezvo vachigona kukuita kuti utaridzike. Kure nekuonekwa sekanganiso yakapusa, izvi zvinogona kukuvadza mufananidzo wekambani yako.
Kuperetera zvikanganiso: nyaya isingafanirwe kufuratirwa
Spelling inotorwa zvakanyanyisa muFrance, kunyanya mune yehunyanzvi munda. Chokwadi, kwemakore mazhinji, izvi zvakabatanidzwa zvakanyanya nemakore echikoro chepuraimari.
Kunze kwaizvozvo, iwe unofanirwa kuziva kuti chokwadi chekugona chiperengo chiratidzo chemusiyano. Nekudaro, iwe haugone kuremekedzwa kana kuratidzika kuvimbika kana iwe uine chiperengo chakaipa.
Sezvo iwe unenge wanzwisisa, kuve nechiperengo chakanaka chiratidzo chekukosha kwemunhu anonyora asiwo kukambani yavanomiririra. Saka iwe wakavimbika kana ukazvigona. Kune rimwe divi, kuvimbika kwako nekwekambani kunoitwa mubvunzo kana waita zvikanganiso zvechiperengo.
Kuperetera zvikanganiso: chiratidzo chechimiro chisina kunaka
Zvinoenderana neVoltaire chirongwa chekupereta chitupa chemuviri, kutengesa pane e-commerce saiti kunogona kudzikiswa nepakati nekuda kwekukanganisa zviperengo Saizvozvowo, iyo yekupedzisira inonyanya kukuvadza hukama hwevatengi.
Kune rimwe divi, iwe paunotumira tsamba nekupereta zvikanganiso, unorasikirwa nekuvimbika. Iwe urikukuvadzawo bhizinesi rako, iro risingachave rakavimbika pamberi pevamwe.
VERENGA Cherechedza kutora musangano, mazano ekushanda
Saizvozvowo, kutumira a E-mail nemhosho dzezviperengo zvinoonekwa sekusaremekedza mugamuchiri. Chokwadi, anozotaura kuti ungadai wakatora nguva yekuongorora zvirimo uye kugadzirisa chero kukanganisa usati wamutumira iyi e-mail.
Zviperengo zvikanganiso zvinoshoresa mafaera ekushandisa
Ziva kuti zvikanganiso zvekuperetera zvinokanganisawo mafaera ekushandisa.
Chokwadi, vanopfuura makumi mashanu muzana evashandisi vane hunyanzvi hwevamiriri pavanoona zviperengo mumafaira avo. Ivo zvirokwazvo vanozvitaurira vega kuti havazokwanise kumiririra zvakakwana kambani kana vatorwa.
Uye zvakare, zvinofanirwa kutaurwa kuti vanhu vanopa kukosha uye kukosha kune zvinhu zvinosangana nezvavanotarisira. Mupfungwa iyi, zviri pachena kuti vashanduri vanogara vachitarisira faira rakashongedzwa zvakanaka, risina zvikanganiso zvechiperengo uye richiratidza kukurudzira kwemumiriri.
Ichi ndicho chikonzero nei pavanowana zvikanganiso muchikumbiro, vanozvitaurira vega kuti uyo anenge achinyorera haana kuita hana panguva yekugadzirira faira rake. Ivo vanogona kutofunga kuti anga asingafarire chinzvimbo ichi, ndosaka asina kutora nguva yekuongorora chikumbiro chake.
Zviperengo zvikanganiso chipingamupinyi chaicho pakupinda kwevanhu vanofanirwa kupinda mune yehunyanzvi nyika. Iine ruzivo rwakaenzana, faira rine zvikanganiso rinorambwa kupfuura iyo faira isina zvikanganiso. Izvo zvinoitika kuti micheto inoregererwa kune typos. Nekudaro, kubheja kwako kwakanyanya kungave kurambidza zvikanganiso mukunyora kwako kwenyanzvi.
VERENGA Imeyiri template yekukumbira ruregerero kumutariri
Ban kuperetera zvikanganiso pabasa Kurume 19th, 2021Tranquillus
pashureGadzira chirongwa chakanaka chekunyora kubasa
zvinoteveraKurwara: anogona mushandi asingataure nezvekumiswa kwebasa anogona kuitwa redundant?
Imeiri yakabudirira yehunyanzvi inoiswa kune akati wandei maitiro
Tsamba yehunyanzvi: Mimwe mitemo yemafomu ekufona akajairwa